Football Khabar » फिफा अवार्डमा रोनाल्डोको भोट मेस्सी र लेवान्डोस्कीलाई : रोनाल्डोलाई दुवैले दिएनन् !
फिफा अवार्डमा रोनाल्डोको भोट मेस्सी र लेवान्डोस्कीलाई : रोनाल्डोलाई दुवैले दिएनन् !
फिफा बेस्ट अवार्डका लागि फिफाको सदस्य राष्ट्रका राष्ट्रिय टिमका कोच र कप्तानले भोट दिन पाउँछन् । उनीहरू एक विधाका लागि ३ जनालाई भोट दिन पाउँछन् । जसमा पहिलो भोटबाट सबैभन्दा धेरै अंक जान्छ भने दोस्रो र तेस्रो भोटबाट कम अंक जान्छ ।
यसपटक टप–३ मा परेका लेवान्डोस्की, मेस्सी र रोनाल्डोमध्ये कसले कुन भोट कसलाई दिए होलान् ? यी ३ जनै आ–आफ्नो देशका कप्तान भएकाले उनीहरू सबैले भोट दिएका थिए । तर, कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नै लागि भने भोट दिन पाउँदैन । तथसर्थ, रोनाल्डो, मेस्सी र लेवान्डोस्की सबैले बेस्ट छान्नका लागि अन्य खेलाडीलाई न भोट दिए ।
फिफाले सार्वजनिक गरेको नतिजाअनुसार बेस्ट अवार्डका लागि यसपटक दोस्रो बनेका इटालियन युभेन्टसका रोनाल्डोले आफ्ना खास प्रतिस्पर्धी बार्सिलोनाका मेस्सीलाई दोस्रो भोट दिएका छन् । तर, मेस्सीले भने रोनाल्डोले कुनै पनि भोट दिएनन् । यता, विजेता लेवान्डोस्कीले भने रोनाल्डो र मेस्सी दुवैलाई कुनै पनि भोट दिएका छैनन् ।
विगत वर्षहरूमा मेस्सीले रोनाल्डोलाई भोट गर्दै आएका थिए, रोनाल्डोले पनि मेस्सीलाई भोट दिन्थे । तर, यसपटक रोनाल्डोले मेस्सीलाई भोट दिँदा मेस्सीले भने रोनाल्डोलाई तेस्रो नम्बरको भोट पनि दिएनन् । कसले कसलाई भोट दिए ? हेरौं नतिजा ?
रोनाल्डोको भोट – (१) लेवान्डोस्की (२) मेस्सी (३) एबाप्पे,
मेस्सीको भोट – (१) नेइमार (२) एमबाप्पे (३) लेवान्डोस्की
लेवान्डोस्की – (१) थियागो अलकान्टारा (२) नेइमार (३) केभिन डे ब्रुयाने
प्रकाशित मिति ३ पुष २०७७, शुक्रबार १६:४७